Ukukhanya kwesiteji nge-12mm kuphela ubukhulu -GL108
Ngeenkqubo zolawulo olupheleleyo kunye nesayensi ezikumgangatho ophezulu, umgangatho ophezulu kunye neenkolelo ezigqwesileyo, siphumelele igama elihle. Kwangelo xesha, u-Eurborn unyanzelisa ukuqhubekeka kwezinto ezintsha, kwaye wazisa oku kukhanya kusuka kwilam yangoku ye-thinnest ye-Eurborn ...
Ukukhanya komthombo - FL410 / FL411
ngomphathi ku 21-07-01
Ukusukela ekuqaleni, u-Eurborn ebambelele kwimilinganiselo "yokuvuleleka nokungakhethi cala, ekwabelaneni nasekuzuzeni, ukufuna ukugqwesa, ukudala ixabiso", ukubambelela kwifilosofi yeshishini "yemfezeko nokusebenza ngokukuko, ukujolisa kwezorhwebo, eyona ndlela ilungileyo ". Siyakholwa ...
Izibane ze-Eurborn Inground-Yenza ubomi bakho bube ngcono
I-Eurborn ibisoloko ilandela umoya weshishini "woMgangatho, wokuSebenza ngokuNcomekayo, uBuchule, kunye nokunyaniseka". I-Eurborn inecandelo layo lokuphanda kunye nophando lwetekhnoloji kunye nophando. Zonke ngumngundo ziveliswa ngokwalo, ngoko unako ukugcina ixesha uyilo imveliso kunye c ...
UKUKHANYA KWENDAWO-Iqela loSapho
ngomphathi ku 21-06-17
ML1021, PL021, PL023, kunye ne-PL026 lolunye uthotho losapho oludumileyo. Ukusuka kwinqaku, ungayibona imbonakalo ukusuka kwincinci ukuya enkulu ngokungafaniyo. Amandla avela kwi-1W ukuya kwi-6W kukhetho lwakho. Le mveliso ikhokele, ke ngoko isetyenziselwa ukukhanyisa i-focu ...
BL100-Ukhetho lwakho lokuKhanyisa ukuKhanya
ngomphathi ku 21-06-09
Ukudibanisa umgangatho ophezulu kunye nezixhobo, ulawulo olunononophelo, iithegi ezinamaxabiso afanelekileyo, inkxaso egqwesileyo kunye nokusebenzisana ngenyameko nabathengi, besiphanda ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso zokuxelisa. Kuyinto ...
Vumela uhlaza kunye nokusingqongileyo okusebenzayo kudityaniswe
ngomphathi ku 21-06-03
U-Eurborn uhlala ezinikele kukhuseleko lokusingqongileyo. Kwikona nganye kwiofisi yethu, kubekwa izityalo ezahlukeneyo. Inxalenye enentsingiselo kukuba sonke isityalo saye sashiywa saza kamva sabuyiswa ngumphathi wethu ukuze sivumele ithuba lokuphinda lizalwe.
Iimveliso zeenkwenkwezi-i-GL116 ekukhanyeni komhlaba
ngomphathi ku 21-05-27
Sazisa ngentengiso eshushu yoseto loseto losapho, i-GL116, i-GL116C, i-GL116H, i-GL116Q, i-GL116SQ. Inqanaba, kwaye kukho 1W, 1.3W, 3W, 3.5W amandla ukuze ukhethe. Kwangelo xesha, ukulungelelanisa iimeko zokusetyenziswa ezahlukeneyo, inokulawulwa yi-RGB okanye i-DM ...
Ukukhanya Okuphantsi komhlaba-Isibhengezo se-GL112
ngomphathi ku 21-05-07
Ngokumalunga nokukhanya kwangaphantsi komhlaba / ukukhanya kwamanzi phantsi kwe-GL112, uyakwazi ukukhetha amandla e-0.5W, 1W okanye i-1.3W yokukhanya okungcwatywayo kwe-GL112. Izinto zizonke zemveliso zenziwe ngebanga laselwandle ngentsimbi engenasici 316. Ifakwe i-CREE ubuhlalu besibane obungeniswe ...
I-Eurborn-Drill fire, thatha amanyathelo okhuseleko
ngomphathi ku 21-04-21
Ngelixa i-Eurborn igxile kwimveliso yezibane ezahlukeneyo, kubandakanya ukukhanya okungaphakathi komhlaba, ukukhanya kweWall, ukukhanya kwespike, njl., I-Eurborn akufuneki ihoye ukhuseleko lwabasebenzi. Ke ngoko, ukuze kuphuculwe ulwazi ngokhuseleko lwabasebenzi, u-Eurborn uququzelele ukubamba umlilo ngo-Epreli 20 ...
Izixhobo ezihlaziyiweyo Ukukhathalelwa kwe-Eurborn malunga
I-Eurborn ihlala ibeka ukubaluleka okukhulu kwimithombo yezixhobo ezinokuhlaziywa. Sisoloko sisixabisile isipho sendalo eluntwini. Yentsimbi yethu yangaphandle engenasiphelo ekhanyisela umhlaba kunye nophuhliso lokukhanyisa i-LED, sizinikele ekwenzeni iimveliso zethu ...
Ilogo yeLaser yokukhanyisa okungaphakathi emhlabeni
ngomphathi ku 21-03-12
Kwixesha elidlulileyo, iisimboli kwiimveliso zaziphawulwa nge-inki ye-jet coding, kodwa ukushicilelwa kwe-inki akukho lula nje ukuphela, kodwa kukwangqinelana nokungabikho kwendalo. Ikwavelisa igesi eyingozi ...